नागार्जुन नगरपालिकालाई उदाहरणीय नगरपालिका बनाउँछौं : नगर प्रवक्ता,थुमराज केसी (भिडियो सहित) - Ankuran Khabar
नागार्जुन नगरपालिकालाई उदाहरणीय नगरपालिका बनाउँछौं : नगर प्रवक्ता,थुमराज केसी (भिडियो सहित)
२०७६ मंसिर २५0
काठमाडौं जिल्लाका १० वटा नगरपालिका मध्ये धार्मिक,पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको नगरपालिका हो, नागार्जुन नगरपालिका । नगरपालिकामा जनप्रतीनिधि चुनिएर आएको पनि २ वर्ष वितिसकेको छ ।
यस अवधिमा नगरपालिकाले के कस्ता कामहरु गरेको छ ? जनप्रतीनिधि आएपछिका उपलव्धि के हुन ? र भावी योजनाका बारेमा अंकुरण खबरका लागि नगर प्रवक्ता तथा वडा नं २ का अध्यक्ष थुमराज केसीसंग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश :
तपाईहरु जनप्रतीनिधि भएर आएको २ वर्ष विति सकेको छ, जनता प्रत्क्ष्य लाभान्वित हुने काम के गर्नुभयो ?
हो, हामी आएको २ वर्ष वितिसक्यो । यो अवस्था हाम्रो लागि संक्रमणको अवस्था भन्दा फरक पर्दैन् किनकी विगत लामो समयदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि वीहिन थियो । यो बेला स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि हरेक काममा धेरै नै भद्रगोल थियो । काम गर्न पनि चुनौतिहरु प्रसस्तै थिए । यो अवस्थालाई हामीले विस्तारै सन्तुलन गर्दै आएकाछौं । यही कारणले पनि जनअपेक्षा र जनप्रतिनिधिले पुरा गर्न चाहेका कामहरुमा केही ढीलाई भएको छ । यद्यपी यो अवधिमा पनि हामीले सिमित स्रोत र साधानको अधिकतम प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काममा तिव्रतर रुपले अगाडी बढेका छौं । शिक्षा स्वास्थ,बाटोघाटो निर्माण,कालोपत्रे,ढलान, खाने पानी लगाएतका आधारभूत कुरामा जनता लाभान्वित भएका छन् ।
अहिले नगरपालिकाले के गर्दैछ ?
यो अवधिमा हामीले अधिकाशं भित्रि सडकहरु निर्माण गरेका छौं । कालोपत्रे,ढलान,बल्किंन गर्नुपर्ने कुरा सम्पन्न गरेका छौं । नगर र प्रदेश स्तरीय योजनाहरु यसपालिबाट सञ्चालनमा आउँछ । हरेक वडामा ठुला योजनाहरु सम्पन्न गछौं । नगरपालिकाका हरेक स्वास्थ चौकीमा ल्याव सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले बजेट बिनियोजन समेत गरेका छौं । रामकोट स्वास्थ चौकीलाई एक्सरे मिसिनको व्यवस्था गरेका छौं । भिमढुंगाको स्वास्थ चौकीलाई नगर स्तरीय मिनि अस्पतालको रुपमा अगाडी बढाएका छौ भने, प्रत्येक सरकारी स्कुलमा गुणस्तरिय शिक्षाको लागि आवश्यक पूवर्धारको विकास गर्दै लगेका छौं । दीर्घकालसम्म नै बजार व्यवस्थापन गर्ने , व्यवस्थित शहर बनाउने कुरामा काम गर्दै छौं ।
जनप्रतिनिधिले अपेक्षाकृत काम गरेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नी, के यो आरोप हो या यथार्थ ?
हो, हामीले पनि पटक पटक यस्ता कुरा सुनेका छौं । स्थानीय तहमा लामो अन्तरालमा जनप्रतिनि आउनु र जनताका आवश्यक्ता, अपेक्षाहरु पनि बढी हुनाले यस्तो गुनासो सुनिएको हो । काम गर्दै जादा कत्तिपय अवस्थामा कानुनी कुरा लगाएत हरेक कुराको तालमेल गर्दै जाँदा केही समय ढिला भएको छ । यसको अर्थ केही कामनै भएको छैन भन्ने हैन । सीमित दायराकै बीच अधिकत जनमुखी काम गर्ने प्रयास गरेका छौ । यसको आभास जनताले पनि गरेको हामीलाई अनुभूत भएको छ । अहिलेसम्म गरिएको कामको प्रतिफल अब आउने बेला भएको छ । अबको एक वर्षमा धेरैनै उल्लेख्य परीणाम आउने गरी तिव्रतर ढंगले काम भैरहेको छ ।
यो नगरपालिकामा धार्मिक,भौगोकि तथा ऐतिसहासिक महत्व बोकेका स्थानहरु छन् । यीनिहरुको बिकास र प्रवद्र्धनमा नगरपालिकाको योजना के कस्तो छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा ऐतिहासिक महत्व भएका मठमन्दिर,गुम्बा,मनोरम पर्यटकीय स्थलहरु छन् । यस नगरपालिकाको सर्वोतम विकासको लक्ष्य भनेकै यीनै कुराहरुको ऐतिहासिक महत्व जोगाउदै समय सापेक्ष विकास,विस्तार गर्ने हो । इचंगुनारायण मन्दिरलाई विश्वसंपादा सुचीमा सुचिकृत गर्न पहल गर्नुका साथै अन्य धार्मिक स्थललाई प्रवद्र्धन गर्न लागेका छौं । स्वीजरलेण्ड पार्क, ह्वाइट गुम्बालाई राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय रोजाईको पर्यटकीय गन्तब्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । यही अनुरुप काम भैरहेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आवश्यक सहयोग पाउन कठीन भयो भन्ने कुरा धेरै आउछ ? यस नगरपालिकाले त्यस्तो समस्या भोकेको छ ?
छैन्, हाम्रो नगरपालीकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसंग राम्रो समन्नन्वय गरेर काम गरेको छ । प्रदेश र केन्द्रबाट पाउने सहयोगमा त्यस्तो असुविधा छैन् । हामीले ठुला योजनाहरु बनाउदै छौं । रामकोट भिमढुंगा सडक राष्ट्रिय योजनाको हो । यो वर्षमा नै यो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । अन्य योजनाहरु पनि पाइपलाइनमा छन् ।
विकास निर्माणका काममा खर्चिएको बजेट लक्षित ठाउँमा कम मात्र सदुपयोग हुन्छ । ठेक्केदारहरुले समयमा काम सम्पन्न गर्दैनन् यस्तो कुरामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमहत्व हुन्छ भन्ने आरोप छ नी,नगरपालिकामा के छ यस्को अवस्था ?
हाम्रो देशमा पहिलेदेखिनै जुन शीर्षकमा बजेट बिनियोजन गर्यो त्यो शीर्षकमा कम मात्र खर्च गर्ने, ठेक्केदार र बिचौलियाका कारण निर्धारित समयमा योजनाहरु सम्पन्न नगर्ने एकै काममा पटक पटक बजेट विनियोजन गरिरहने ,काम ढिला सुस्त गरेका उदाहरण धेरै छन् । यस्ता कुरामा जनप्रतिनिधि वा निगमन गर्ने निकायकै सहमति भएको कुरा बेला बेला आएकाले पनि जनताले यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन् । यस्ता आरोप नलाग्ने गरि काम गर्न र एक पटक निर्धारण गरेको बजेटले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले नगरपालिकामा काम गरिरहेका छौं । भलै केही योजनाहरुमा विविध कारणले गर्दा कहिलेकाही थोरै ढीलासुस्ती हुने गरेको छ । तर त्यसलाई पनि जतिसक्दो छिटो सम्मपन्न गर्ने गरेका छौं । हरेक काममा अनाआवश्यक दवाव, प्रलोभव र विचौलियाको बिगबिगिबाट यस नगरपालिकाका कामलाई दूर राख्ने कुरामा हामी हरसमय सचेत भएर लागेका छौं ।
तपाई नगरपालिकाको वडा नं २ को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ? तपाई अध्यक्ष भएर आएपछि यस वडामा के परिवर्तन गर्नुभयो ?
म वडा अध्यक्ष भएर आएपछि यस वडाको पूर्वधार विकासमै केन्द्रित भएको छु । वडाका प्राय भित्रि सडकहरु कालोपत्रे, ढलानको काम सकिएको छ । डीपबोरिंग मार्फत घरघरमा खानेपानी पुयाउने काम भैरहेको छ । यहाँ देवनगर भन्दा तल्लो भागमा पानीपर्दा डुवानको समस्या छ । यसलाई दीर्घकालिन रुपमा समधान गर्न गारिपरेको छु । वडाबाट सेवाग्राहीले पाउने काममा कुनै झन्झट र ढिलासुस्ति नहोस भन्ने कुरामा म लगाएत वडाका सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सचेत भएर लागेका छौं ।
आम नगरबासीलाई के भन्नुहुन्छ ?
बिकास निर्माणका काममा हामी व्यक्तिगत, समुहगत र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्न र त्यही अनुरुप नगरबासीलाई सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। यसको साथै सेवाग्राहीको काममा कोही कसैले ढिलासुस्ती गर्ने,प्रलोभव देखाउने,दवावदिने काम गरेमा त्यस्तो कुरा जनप्रतिनिधि वा नगरपालिमा सम्वन्धित पक्षलाई भन्न पनि अनुरोध गर्दछु । जनप्रतिनिधि र जनताको सुमधुर सम्वन्धले नै नागार्नुृन नगरपालिकालाई विकसित,प्रगतिशिल र अनुकरणीय नगरपालिका बनाउन सम्भव छ ।
‘नेपाल आइडल सिजन-३’ को प्रशारण मिति सार्वजनिक